Namboarin’ny orinasa Ambatovy ny lalana ao Tsarahonena, Tanambao Verrerie
Tefy 17:30:00 social
« Fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny kaominin’i Toamasina II sy ny orinasa Ambatovy no nanamboarana ny lalana ao Tsarahonenana izay mampifandray an’i Toamasina I sy Toamasina II ao Tanambao Verrerie, saingy ny fandaminana sy famoaham-bola ary ny fanakisahana ireo fefin’olona nangalatra ny tany no nahatara ny fanombohan’ny asa rehetra », io no nambaràn’ny ben’ny tànanan’i Toamasina II, Razafindramosa Nicaise, raha nijery ny fanombohan’ny asa izy ny sabotsy lasa teo tao Tsarahonenana.
Lalana mirefy 1.400 m izy ity izay atao tara ary ho vita ao anatin’ny iray volana ka ny orinasa SOGEA-SATOM no nahazo ny asa fanamboarana azy. Raha ny fanazavana dia lalana nasolo ilay lalana nandalo tao amin’ny tanin’ny orinasa SAGIMEX ity lalana ity, satria nofefen’ilay tompon-tany ny fananany nefa olona maro ao Tsarahonenana sy Tsararivotra ary Tanambao Verrerie no mampiasa izany.
Hampandry fahalemana ny tanàna sy ny fokonolona manodidina ihany koa ny fahavitan’ilay lalana ; isan’ny lalana nampiasain’ny jiolahy tamin’ny resaka fakana an-keriny ilay teratany sinoa teto Toamasina tany amin’ity faritra ity sy ny nanarahan’ny polisy azy ka nahatonga faharatrana polisy iray rehefa nitifitra ireo jiolahy. “Matotra ny fiaraha-miasanay amin’Ambatovy ao anatin’ny kaominina misy anay, satria miantraika amin’ny vahoaka mivantana hatrany ny asa sosialiny” hoy hatrany ny ben’ny tanàna.